JINGHPAW KASA: ဗမာ့တပ်မတော်မှ ၂ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု
ဗမာ့တပ်မတော်မှ ၂ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု
၂၀ ရက် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်။
ခူမောကျေးရွာ၊ ခူဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ္မတူမြို့နယ် တွင် ဗမာ့တပ်မတော် တပ်မ (၇၇) မှ တပ်သားတဦးမှ အသက် (၃၀) အရွယ် အမျိုးသမီးတဦးအား မုဒိန်းကျင့်ရန် အတင်းအဓမ္မကြံစည်ခဲ့ရာ၊ အမျိုးသမီးမှ အော်ဟစ်သဖြင့် ထိုအမျိုးသမီးအား ထိုးကြိတ်၊ ကန်ကျောက်၊ ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် အသက်သေဆုံးလုနီးပါး ဖြစ်နေချိန်တွင် အိမ်နီးနားချင်း အမျိုးသမီးမှ အော်သံကြား၍ ထွက်လာရာ မြင်ကွင်းကို တွေ့မြင်သဖြင့် အခြားသူများအား အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသဖြင့် လွှတ်မြောက်ခဲ့ရသည်။
ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးမှာ သတိလစ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသဖြင့် ဆေးကုသခံယူခဲ့ကြောင်း၊ ယခုမနက်တွင် နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
January (21),awoman of (30) years old from Hku Maw village, Hku Hpeik Village Track, Namtu Township in Northern Shan State was almost raped byasolder from Government Army Battalion (77). As she was shouted loudly, the soldier attacked her and almost killed while her neighbour herd and found her. She survived as more villagers ran to the site. She got medication for injuries and returned back home this morning.
Labels: English version (Kachin News), Jinghpaw Mung Shiga